LAYAABKA DUNIDDA Archive | TOP NEWS
ARRIN YAAB LEH: Nin isticmaalka Twitterkiisa ku waayay arrin yaab leh
By Tifaftiraha Somalida Maanta on September 2, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Nin ka mid ah dadka isticmaala barta Twitter ee dalka Japan ayaa laga mamnuucay in uu isticmaalo bartani bulshada ka dib markii uu ku hanjabay in uu dilayo kaneeco. Qofka oo waxyaabo aflagaado ah ku soo qora barta Twitter ayaa mararka qaar laga mamnuucaa isticmaalka bartaasi. Balse go’aanka xannibida cinwaanka @nemuismywife looga xannibay in uu […]
DHACDO FOOL XUN: Lamaane ‘dilay haweenay si ay ilmaheeda u qaataan’
By Tifaftiraha Somalida Maanta on August 30, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA, WARARKA DIBADDA
Lamaane ku sugan gobolka North Dakota ee dalka Maraykanka ayaa lagu soo oogay in ay dileen haweenay uur leh si ay u sheegtaan in ay ilmahaas iyagu dhaleen. Savanna LaFontaine-Greywind oo 22 jir aha ayaa lahayd uur siddeed billood ah markii la waayay 19kii bishan Agoosto. Maydkeeda ayaa Axadii laga helay wabiga North Dakota iyadoo […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on August 22, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA, WARARKA DIBADDA
Maxkamadda ugu saraysa dalka Hindiya ayaa sharcidarro ku tilmaantay furitaanka degdeg ah ee saddexda dalqadood ay halka mar ku dhawaaqaan ragga Muslimka ah ee dumarka furaya. Dadka u ololeeya xuquuqda dumarka ee dalka Hindiya ayaa sheegaya in dalqadaha saddexda goor ah ay fuquuq ku yihiin haweenka, iyaga ayaana maxkamadda ka dalbaday in la mamnuuco. Dadka […]
By Mohamed Abdulle Hassan on July 4, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Qisadaan waxeey ka dhacday magaalada Burco oo katirsan maamulka isku magacaabay Somaliland, waxeeyna ku saabsantahay “Hooyo iyo Inanteedii 14 sano kala maqnaa oo dib isu helay”. Qisadan waxaa soo diyaariyay oo muuqaal kazoo duubay samafale wariyaha Caanka ah Cabdi Maalik Muuse Coldoon.
By Mohamed Abdulle Hassan on July 4, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA, WARARKA DIBADDA
Booliska gobolka Zambezia ee bartamaha dalka Mozambique ayaa sheegaya in uu ballaarinayo baaritaannada ka dhanka ah sare u kaca dilalka loo gaysto ragga bidaarta leh. Tan iyo bishii la soo dhaafay ayaa waxaa dalkaasi lagu dilay dhowr nin oo bidaar leh. Booliska ayaa ka shakisan dadka wax ku dabiiba dawo dhaqameedka in ay faafinayaan warar […]
Duullimaadka dayaaradda AirAsia X ee u socday Kuala Lumpur ayaa lagu khasbay inuu ku labto Australia, ka dib markii ay shimbiro ku dheceen oo rakaabkii ay ka argagaxeen. Dayaradda oo sidday 359 qof ayey dhibaatadu la soo daristay markii ay ka kacday xeebta Gold coast 15:20 galabnimo ee Isniintii. Rakaabka ayaa sheegay inay maqleen dhawaaq […]
By Mohamed Abdulle Hassan on July 1, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Hakeem iyo Temur oo ah laba wiil oo 19 jir ah kuna nool magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa hees ay si baashaal u sameeyeen u noqtay mid caan ah oo shaac baxday, taasoo kaalinta koowaad ka gashay idaacadaha dalkaasi. Labadan fanaan ee dhalinyarada ah ayaa oo ku baashaali jiray studio ku yaal Oslo auaa […]
By Mohamed Abdulle Hassan on June 9, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Haweeney 81-jir ah oo sameysay koox haween kaliya ah oo qashinka ka uruuriya tuulada ay ka deggan tahay dalka Lubnaan ayaa haatan waxaa ku soo qulqulaya dad fara badan oo waydiinaya qaabka ay howshan u qabatay. Sagaal bilood oo ka mid aheyd sannadihii 2015 iyo 2016 ayaa waxaa waddooyinka magaalada caasimadda ah ee Bayruut buuxiyay […]
By Tifaftiraha Somalida Maanta on May 30, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Dadka degmada Qardho ee Gobolka Bari ayaa welwel ka muujiyay dhulka calaamado lagu arkay duleedka magaalada oo ah inuu dhulku yeeshay jeexdimo godad ah. Waxay dadku arkeen iyadoo meel u dhow magaalada uu dhulku kala jeexmay ayna ka sameysmeen jeexdin u eg inuu dhulku kala qeybsamayo, taasoo keentay cabsi weyn oo dadku degaankaasi gashay. Lama […]
DAAWO SAWIRADA: Boqor caan ah oo soo bandhigay qiyaano uu ku shaqeyn jiray
By Tifaftiraha Somalida Maanta on May 21, 2017 LAYAABKA DUNIDDA, WARARKA
Boqorka dalkaasi Holland Willem-Alexander ayaa dhowaan shaaca ka qaaday in uu wade ka ahaa mid ka mid ah diyaaradaha rakaabka dalka Holland mudo 21-sano ah isagoona u shaqeynayay shirkadda diyaaradaha KLM. Boqorkan oo ay ku filnaan weysan in uu u boqoreeyo shacabka reer Holland ee korka u dhaafaya 17-ka milyan, ayaa waxaa uu hoosta ka […]